Maxkamada Wilaayada Islaamiga Hiiraan Oo Xukun Dil Ah Fulisay. – Bogga Calamada.com
Maxkamada Wilaayada Islaamiga Hiiraan Oo Xukun Dil Ah Fulisay.
Fagaaro ku yaala degmada Buq aqable ee Wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan waxaa Barqo nimadii maanta ka dhacay Xad ka mid ah Xuduuda Allaah.
Xadkan oo ahaa Xaddu Riddah oo dil toogasho ah waxaa lagu filay askari ka tirsan dowlada Ridada kaasi oo lagu magacaabi jiray Sahal Axmed Rasle,waxaa goobta fagaaraha ee dilka uu ka dhacay soo xaadiray qeybaha bulshada ee ku dhaqan magaalada iyo deegaanada hoostaga.
Askarigan lagu dilay goobta fagaaraha ee Maxkamada ay ku fulisay Xadka Ridada ee dilka ah ayaa ka tirsanaay maleeshiyaatka dowlada Ridada gaar ahaan kuwa ay tababartay dowlada daba dhilifka Imaaraatka Carabta.
Qaadiga ayaa goobta fagaaraha ka sheegay in ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay askarigan gacanta ku dhigeen isagoo gaari shacab isku soo qariyay kana soo baxay magaalada Muqdisho kuna sii jeeday dhanka degmada Cabudwaaq ee gobalka Galgaduud.